Ity no zavatra fantatsika momba ilay LG G6 | vaovao efa nandrasana Vaovao momba ny gadget
Ity ny zavatra fantatsika momba ny LG G6 vaovao sy nandrasana
Villamandos | | Finday
Ny Kaongresy Iraisam-pirenena Finday manaraka izay hanomboka any Barcelona amin'ny andro ho avy dia ho voalohany amin'ny taona maro izay tsy ahitantsika ny fampisehoana ny sainam-pirenena Samsung vaovao, fa ao no ahitantsika ny fomba fampisehoan'ny LG, Sony na i Nokia aza smartphone vaovao amin'ity taona ity. LG dia efa nanamafy fa hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny LG G6 vaovao, izay andrasana ela aorian'ny "tsy fahombiazana" izay LG G5.
Nandritra ny andro farany dia nianatra antsipiriany maro momba ity terminal vaovao ity izahay, ny sasany nomen'ny LG tenany ary ny maro hafa izay vokatry ny fivoahana maro izay niseho. Mametraka milamina ny fampahalalana rehetra momba ny LG G6 Anio izahay dia hasehontsika anao amin'ity lahatsoratra ity izay amboarantsika avy any ambony ka hatrany ambany izay ho filamatra vaovao an'ny LG.
2 Efijery lehibe kokoa
3 Toetra mampiavaka sy manokana teknika
3.3 Iris scanner
4 Fahafahana sy vidiny
Ny LG G5 dia nanolotra fomba hafa amin'ny fahazoana ny smartphone, farafaharatsiny amin'ny lafiny famolavolana, miankina amin'ny modules ary manome antsika traikefa mahaliana izay, na izany aza, tsy tratry ny mpampiasa. Ankehitriny LG dia mikasa ny hanome fihodinana amin'ny famolavolana azy, ho lasa nentim-paharazana kokoa, na dia tsy manadino ny fotony aza.
Tahaka izay nitranga tamin'ny fitaovana teo aloha dia hanana ny bokotra lehibe ao aoriana isika, eo ambanin'ny fakantsary roa sosona ihany.
Etsy ambany no ahitanao ny hamorona amin'ny antsipiriany ny famolavolana ny LG G6 vaovao sy antenaina;
Mikasika ny loko isan-karazany dia toa hitantsika amin'ny loko mainty mangirana ilay LG G6 izay efa hitantsika voalohany tamin'ny iPhone 7 ary vao haingana aza Galaxy S7. Ho fanampin'izany dia hanana dikan-loko maro hafa koa isika amin'ny loko samihafa ary toa iray aza amin'ny famaranana voalamina.
Efijery lehibe kokoa
LG dia te-hanome lanja manokana tato anatin'ny andro vitsivitsy, miaraka amin'ny teasers maro sy fampahalalana momba ny haben'ny efijery, izay toa midadasika indrindra ary indrindra misy zana-kazo vitsivitsy dia tena amin'ny endriny natombok'i Xiaomi Mi Mix.
Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy voamarina ny santimetatra hanan'ity efijery ity, na dia efa nambara fa hanana endrika 18: 9 izy fa tsy ilay 16: 9 nentim-paharazana izay ampiasain'ny ankamaroan'ny fitaovana finday. Ny fanapahan-kevitra dia QHD + miaraka amin'ny tahan'ny pixel izay tsy hifanaraka amin'ny mahazatra.
Toetra mampiavaka sy manokana teknika
Hodinihintsika ny ao anatin'ity LG G6 ity ary noho izany dia miresaka momba ny toetra sy ny teknika manokana.
Raha ny momba ilay mpikirakira dia nantenaintsika rehetra ny hahita ny Snapdragon 6 ao anatin'ny LG G835, saingy raha ny tsiliantsofina farany dia toa tsy voamarina akory fa tsy hahita ilay processeur farany Qualcomm izay natokana manokana ho an'ny Samsung Galaxy S8.
Toa ny sainam-pirenena LG vaovao no mila manorim-ponenana amin'ny Snapdragon 821, processeur matanjaka be, saingy tsy isalasalana fa hamela anao ho fatiantoka izany raha oharina amin'ilay fitaovana Samsung vaovao izay haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 29 martsa.
Tao anatin'ny ora farany dia nisy nanaporofo izany ny bateria LG G6 dia hanana fahaizana 3.200 mAh. Tsy habetsahan'ny mAh be loatra izany, fa mety mihoatra ny ampy ny fanomezana fahaleovan-tena lehibe ho antsika. Ho fanampin'izay, hoy ny fanehoan-kevitr'i Lee Seok-jong, talen'ny serasera an'ny LG Electronics, ny terminal vaovao dia nihatsara be tamin'ny resaka fizakan-tena, ary koa amin'ny fiarovana sy kalitao, zavatra iray izay ankasitrahana indrindra.
Ny bateria na ny processeur dia tsy ho olana mifandraika amin'ny hafanan'ny terminal intsony ary noho ny fampidirana fantsom-panafanana dia ho lasa mandaitra kokoa ny fanaparitahana ny hafanana. Izany dia tsy isalasalana fa hisorohana ireo olana tamin'ny lasa na ny hafanana be loatra amin'ny bateria izay matetika miafara amin'ny fanimbana azy ary manome fiadanam-po be ho an'ny mpampiasa aorian'ny zavatra hitantsika amin'ny Galaxy Note 7.
Endri-javatra iray hafa izay hitantsika ao amin'ny LG G6 dia ny scanner iris, izay efa niresaka efa ela. Ny tsaho tato ho ato dia manome lanja manokana ity fomba ity mba hanomezana fiarovana bebe kokoa ny angon-tsaintsika sy amin'ny ankapobeny ilay fitaovana hanao ny première-ny, miaraka amin'ny tanjona hanome zava-baovao hahatonga ny mpampiasa rehetra hanadino ny tsy fahombiazan'ny LG G5.
Heverina fa ity scanner iris ity dia tsy ho fiarovana fotsiny amin'ny finday fa hanamafisana ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny serivisy fandoavam-bola LG na Android Pay.
Ny smartphone voalohany namely ny tsena tamina scanner iris dia ny Galaxy Note 7, ary ny LG G6 dia toa ny faharoa. Manantena aho fa izy io dia miasa amin'ny fomba niasany tao amin'ny Galaxy Note 7 ihany, fa ambonin'izany rehetra izany dia tsy miafara amin'ny fipoahana sy fandrehitra toa ny terminal Samsung.
Araka ny fantatsika rehetra Ny LG G6 dia haseho amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Mobile World Congress izay hatao any Barcelona. Ny datin'ny hetsika dia amin'ny 26 Febroary ho avy izao amin'ny 12 ora folak'andro.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy daty manokana hahatongavany eny an-tsena, zavatra izay mety ho fantatsika amin'ny hetsika fampisehoana. Mazava ho azy, ny tsaho rehetra dia milaza fa ho hita manerantany ny sainam-pirenena vaovao amin'ny 10 martsa.
Amin'izao fotoana izao dia tsy manana vaovao momba ny vidiny izahay, zavatra somary hafahafa ihany, na dia amin'izao aza dia misy ny tsaho milaza izany mety hamely ny tsena amin'ny vidiny 699 euro. Ity vidiny ity dia somary ambany raha oharina amin'ireo fitaovana hafa antsoina hoe avo lenta eny an-tsena, angamba hanavahana azy amin'izy ireo amin'ny fomba sasany.
Mihevitra ve ianao fa hanaitra anay ny LG amin'ny fampisehoana ny LG G6?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo tambajotra sosialy misy anay ary lazao ihany koa izahay hoe inona ny fampiasa, ny famaritana na ny asa tianao ho hita ao amin'ny sahanin'ny orinasa Koreana Tatsimo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ity ny zavatra fantatsika momba ny LG G6 vaovao sy nandrasana
Bony Anagua Nina dia hoy izy:
Amin'ny maha mpampiasa LG antsika dia aleontsika rehetra ny fizakan-tena sy ny faharetan'ny bateria, toy ny fangatahana bateria 4500 milliamperes mandroso satria ny sasany amintsika dia mandeha ary toy ny
Na tsy hesorina izy io, lany vola aman-karena izahay, ankoatran'izy ireo manova ny karazana bateria amin'ny polymer lithium mandritra ny fotoana lava kokoa, tsy misy dikany na ny habetsaky ny fahatsiarovana ny processeur raha tsy hoe lehibe kokoa ny fizakantena.
Valiny tamin'i Bony Anagua Nina
Canon EOS M6, andao hojerentsika izay atolotray antsika amin'ity fakantsary vaovao ity
Samsung hanambara ny daty fandefasana Galaxy S8 ao amin'ny MWC